Nagarik Shukrabar - ‘रातो साडी लगाएर नाच्दैमा तीजे भाका हुन्न’
बुधबार, ११ बैशाख २०७६, ०४ : ५५
‘रातो साडी लगाएर नाच्दैमा तीजे भाका हुन्न’
बुधबार, २७ भदौ २०७५, ०५ : ०२ | शुक्रवार
गीत संगीत र मनोरञ्जन । भक्तिभावसँगै तीज मिठो पर्व पनि हो । तीज भन्नेबित्तिकै माइती सम्झन्छौं । जन्मेको घर आँगन, आमाबुवा, दाजुभाइ, मावली साथीसङ्गी सम्झन्छौं । तीजका बेला घरको सबै काम छाडेरे महिला जसरी पनि माइत जान्थे ।
तीज नभइदेएको भए फूपू र भदाको साइनो अहिलेजस्तो सुमधुर हुने थिएन । यसले पारिवारिक सम्बन्ध पनि जोडेको छ । बाबु आमा, दाजुभाइ सम्बन्ध उत्तिकै जोडेको छ । अघिपछि जेजस्तो भए पनि तीजमा मिठो खाने गरिन्थ्यो । तीजको बेग्लै अपनत्व थियो ।
म बुझ्ने हुँदा पोखराका हालको टेलिकम नजिक, मालेपाटन, रामघाट, बाटुलेचौरलगायतमा ठूल्ठूला चौर थिए । ती चौरमा बसेर दिदी बहिनीले तीजमा गीत गाउँथे । छोरी बेचेका, सासूले दुःख दिएका, पराई घर जाँदा पाएको दुःख, श्रीमान्ले नपढेका लगायत विषयका गीत तीजे भाकामा गाउँथे । त्यतिबेला पुरुषहरुले हेर्थे । मादल बजाउन सहयोग गर्थे । यस्ता कार्यक्रम टोलटोलमा हुन्थे ।
दिदी बहिनी गाउँथे, दाजुभाइले चिया पकाएर दिन्थे । कति रमाइलो हुन्थ्यो ।
तीज समाचारवाहक चाड पनि हो । त्यतिबेला माइतीले तीजे गीतमार्फत छोरीका पीडा, दुःख पाएका, श्रीमान्ले नपढेको, दुःख पाएको सबै कुरा बाहिर आउँथे । अघिपछि भन्न नपाएका कुरा, वेदनामार्फत तीजे गीतमा निर्धक्क भन्ने अवसर थियो ।
अझ त्यो भन्दाठूलो महŒव चेली र माइती सम्झने प्रक्रिया हो । त्यतिबेला वर्षमा एकपटक भए सासूसँग बिदा मागेर दिदी÷फूपूलाई अघि लाएर लिने चलन थियो । अहिले आएर ठ्याक्कै उल्टो भयो । कहिले तीजमा मायाप्रीति लाउने, घुम्न जाने भन्नेजस्तो भयो
तीज महिलाको स्वतन्त्र पर्व पनि हो । वर्षभरिका कुरा तीजमा भन्ने हो । बाबुलाई मेरो जोवन जान लाग्यो बिहे गरिदेऊ भन्ने कुरा पनि आउँथे गीतमा । तीज विशुद्ध महिलाको चाड हो । तीजको सांगीतिक पाटो पनि उत्तिकै छन् । यसको सबैभन्दा बलियो पाटो संगीत हो ।
म सानै छँदा नाग पञ्चमी आउने बित्तिकै यो पटक तीजमा के गीत गाउने हो ? के विषयवस्तु छान्ने हो ? गाइँगुइँ सुरु हुन्थ्यो । बेलुका कुन घरमा तीज गीत गाउँदै नाच्ने भन्ने सल्लाह एक साताअगाडि नै हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन ।
अहिले त कुन गीत गाउने ? कसको घरमा तीजमा नाचगान गर्ने भन्ने जमाना त हरायो । बजारमा तीजका नाममा असाध्यै छाडा गीत आएका छन् । हरेक पर्वका गीत हुन्छन् । तीजमा गाइने भनेको पर्व गीत हो । यसको महत्व धेरै छ ।
तीजमा गाइने गीतका अनेकन भाका छन् । मालश्री र देउसीरे, सोरठी, रत्यौली जसरी पर्व गीत हुन्, तीजमा गाइने गीत पनि ठ्याक्कै त्यस्तै पर्व गीत हुन् । अरु पर्व गीत फेरिएनन् । तर, तीजे गीत पूरै फेरियो ।
व्यवसायिकताको नाममा तीज गीतमा असाध्यै विकृति भित्रिए । अहिले तीजे गीत यति डामाडोल भए कि छायाङ्कन गरिएका गीतमा रातो साडी राखेकै भरमा तीजे गीत भए ।
तीज गीत भनेर निकालिने गीतका भिडियोबाट रातो साडी हटाइदिने हो भने ती गीत रत्यौली जस्ता लाग्छन् । रातो साडी लगाएर दुई चारजना नाच्दैमा ती तीज गीत हैनन् ।
तीजमा गाइने गीतका बरिलै, निराजाले, मिर्मिजालैमा, हम्क्याइलो कठै लगायतका थेगोहरु छन् । तीनले विशुद्ध नारी भावना समेट्थे । यस्ता गीत आजभोलि आउनै छाडे । कसले खोज्ने यस्ता तीजका भाका ? कसले गाउने यस्ता मर्मस्पर्शी गीत ?
पछिल्लो धारमा गाइएका गीतले तीजलाई खाली मायाप्रीति लाउने चाडको रुपमा विकास गरेका छन् । समयसँग संस्कृति परिवर्तन त हुन्छ । तर, मूल मर्म त मर्न दिनु भएन ।
कलाकार भइसकेपछि आफ्नो धर्म सम्झेर गीत आउनुपर्छ । निर्देशक, संकलक, रचनाकारले पनि विचार गर्नुपर्छ । जे पायो त्यही सुन्नेले पनि कलाकारलाई औंला ठड्याउनुपर्छ अनि बल्ल सुधार हुन्छ ।
धर्मछाडा प्रवृत्ति हावी भयो । तीजको नाम लिएर जस्ता गीत गाए पनि भयो । जे बनाए पनि भयो । तीजे गीत भन्दियो सकियो । चिन्ताको विषय यही हो ।
प्रस्तुति ः मनोज घर्तीमगर
आफ्नै अनुहार हेरेर फुरेको गीत
'दाह्री फुल्दा र चस्मा लगाउँदा उमेर भन्दा १० वर्ष बुढो अनुभव भयो । अनि शब्द फुर्यो ‘दाह्री फुल्यो बैँसमा, चस्मा लाउँछु पावर’ । एकलाइन शब्द कोरेँ । मिठो लाग्यो पहिलो लाइन । अनि अन्य लाइन फुराउन थालेँ ‘गाउँमा दुई दिन बस्दैनाैं, लागि हाल्छौ लावर’ ।'
सनुप पौडेलका प्रिय १० सुर
सनुप पौडेलले नेपाली आधुनिक पप गीतहरू गाएका छन् भने थुप्रै गीतहरूमा संगीत भरेका छन् । ‘रियालिटी शो भ्वाइस अफ द नेपाल’को जज समेत रहेका उनले आफ्ना पाँच र अरूका पाँच प्रिय लाग्ने गीत शुक्रवारलाई बताएका छन् ।
रियालिटी चेक : द भ्वाइसकी चकचके अभया, आइडलको सेट फेरियो
पहिलोपल्ट नेपालमा भित्रिएको फ्रेन्चाइज रियालिटी सो ‘नेपाल आइडल’ले पहिलो सिजनबाट बुद्ध लामालाई नेपाल आइडल बनाइसकेको छ भने दोस्रो नेपाल आइडल बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा जारी छ ।